Wararka - Safarka tobanka sano ah ee adduunka ugu sareeya
Toban sano oo safar ah adduunka ugu sareeya
2011, Gaobeidian PRISES Biotechnology Co., Ltd. ayaa la aasaasay;
2015, Soosaarka shirkadda: Kondhomyada, Uurka iyo Ukunta xirmada tijaabada ayaa si guul leh ugu gudbisay shahaadada CE
2018, Shirkaddu waxay kaqeybgashay Bandhigga Caalamiga ah ee Koonfur Afrika waxayna bilawday mashruuca qaabeynta suuqyada adduunka
Waxba illaa iyo hadda, laga bilaabo geeska Baoding illaa suuqa caalamiga ah, shirkadda PRISES Biotechnology Co., Ltd. waxay si xawli ah u koraysay iyadoo uu hoggaaminayo madaxa guud, Mr Meng Lingwen. Iyada oo aqbalaadda wanaagsan iyo sumcadda laga helay suuqa caalamiga ah ee tayadeeda wanaagsan tahay, sidaa darteed badeecooyin badan ayaa loo dhoofiyay in ka badan 50 dal ama gobollada dibedda ah.
Hogaaminta tikniyoolajiyadda caafimaadka, gaaritaanka taalada caafimaadka. Iyadoo lagu sii xoojinayo horumarinta suuqa qalabka caafimaadka, adeegyada shirkadda waxaa laga ballaariyey hal goob oo ah baaritaanka In Vitro Diagnostic (IVD) illaa qaybaha ganacsiga badan sida baaritaanka cudurka reagent, muunad qaadashada, qalabka caafimaadka ilaaliya.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa lagu dhisay aqoon isweydaarsi nadiif ah oo qiyaastii ah 3000 mitir murabac, oo ay ku jiraan aqoon isweydaarsi nadiif ah oo 100000 ah (550 ㎡) iyo shaybaarka R & D ee heerka 10000 heerka (150㎡)
Bilowgii COVID-19 ee 2020, shirkadda PRISES waxay dardar gelisay mashruuca xirmada tijaabada COVID-19 maadaama ay tahay soo saaraha xirfadle ee xirmada baaritaanka IVD. Bishii Juun 2020, xirmada tijaabada COVID-19 oo ay soo saartay shirkaddu waxaa lagu caddeeyay heerka caalamiga ah. Intaas ka dib, xirmada tijaabada ayaa si dhakhso leh loogu bilaabay suuqyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah waxaana laga caawiyay mashruuca lagu ogaanayay fayraska COVID-19.
Waqtiga boostada: Meey-26-2021